March 2021 – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo ansixiyay laba xubnood oo kamid noqonaya Guddiga Madaxa banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka
March 31, 2021 March 31, 2021 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Barlaamanka Federaal-ka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa-Hargeysa, ayaa ansixiyay labo xubnood oo kamid noqonaya Guddiga Madaxa banaan ee Xuduudaha iyo Federaalka. Axmed Zeylici Muuse iyo Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Xamza, ayaa si rasmi ah maanta uga mid noqday guddiga, waxaana oggolaatay 136-Xildhibaan, 3-Xildhibaan ayaa ka aamustay, wax diidayna ma jirin. Labada xubnood ayaa isla kulanka lagu hor dhaariyay.
Madasha Badbaado Qaran oo ka digtey muddo kororsi, iyadoo maanta Baarlamaanka uu leeyahay kulan
March 31, 2021 Hassan Istiila
Madasha Badbaado Qaran oo soo saartay war-saxaafadeed ayaa caddeysay in aysan gacmaha ka laaban doonin wax ay ku ku tilmaameen muddo kororsi lagu carqaladaynayo doorashooyinka, laguna qalqal gelinayo xasilloonida, dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa sheegeen in hanjabadda ka dhanka ah 15-kii xildhibaan ee uu Mursal sheegay in uu ka ganaxay kulamada golaha shacabka, waxii masuuliyad darro ee ka imaada uu Goddmiyaha golahaas uu qaadi doonno. Hadalka madasha ayaa imaanaya xili maanta Baarlamaanka uu leeyahay kulan looga hadlayo caabuqa COVID-19. Madasha waxaa ku mideysan Golaha musharaxiinta, madaxda Puntland…
Golaha Shacabka ee Baarlamanka Somaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku leh Muqdishu
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamanka Somaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah magaaalada Muqdishu ku yeelanaya kulan xasaasi, kaddib markii laba maalmood ka hor uu baaqday kulankooda. Fariimo xalay telefoonada loogu diray Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa lagu sheegay inuu beri jiro kulanka baarlamanka oo loogana hadlayo ajandayaal ay ka mid yihiin. saddex ajende ah oo kala ah:- 1- Covid-19 2-U codeyn laba xubnood oo guddiga M/B ee Xuduudaha 3- iyo U codeyn sharciga Qaxootiga Qaranka. Xildhibaannada mucaaradka iyo musharraxiinta ayaa shaki badan ka muujinaya kulanka maanta, iyagoona saadaalinaya in uu ku…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo madaxweynaha Koonfur-Galbeed oo kulan ku yeeshay Muqdishu
March 30, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta hoygiisa ku qaabilay madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Koonfur-galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen. Kulanka oo sidoo kale ay ka qeyb-galeen wasiiro ka tirsan federaalka iyo Koonfur-Galbeed, ayaa looga hadlay xaaladdaha siyaasada ee dalka gaar ahaan arrimo la xiriira doorashooyinka iyo shirarka ka socda Muqdishu. Guddoonka Golaha Shacabka, ayaa dhowaan ugu baaqay madaxda maamul-gobolleedyada in ay ka shaqeyaan heshiis doorasho dalka ku haga doorasho xor iyo xalaal ah.
Tababar ku saabsan habraaca sharci-dejinta Golayaasha Baarlamaanka oo maanta loo qabtay xildhibaannada Galmudug
Tababar aqoon is-weydaarsi ah oo ku saabsan habraaca sharci-dejinta Golayaasha Baarlamaanka, ayaa maanta loo daah-furey xubno kamid ah Baarlamaanka maamulka Galmudug. Guddoomiyaha Baarlamaanka Dawlad Goboleedka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal oo uu wehliyo Guddoomiye Kuxigeenka 1aad Baarlamaanka Galmudug Mudane Cabdullahi Xersi Maxamed ayaa tababarkan ku daah-furay magaalada Dhuusamareeb. Tababarka waxaa soo qaban qaabiyey Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka Galmudug Mudane Xassan Maxamuud Faarax, waxaana bixinayey Hay’adda Max-Planck Foundation ee ka shaqeyso taageerada arrimaha Baarlamaanada iyo Dastuurada.
Ururka Haweenka Qaranka oo u baaqay hoggaamiyaasha siyaasadda in ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyin
Kulan ay soo qaban-qaabiyeen Ururka Haweenka Qaranka oo looga hadlayay xaaladdaha siyaasadda ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdishu. Qaar kamid ah haweenka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirarka u dhexeeya madaxda maamul-gobolleedyada iyo dowladda dhexe, kaas oo maalmahan ka socda caasimada. Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale, oo ka hadashay kulanka ayaa rajo wanaagsan ka muujisay mira-dhalka shirka, loona istaago sidii ay u dhici laheyd doorasho heshiis lagu yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka Soomaaliya. Wax aan ka heshiin karno yaan wakhti badan…
Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo maanta kulan ku yeeshay Muqdishu
March 29, 2021 Hassan Istiila
Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada dalka ayaa maanta kulan la yeeshay Wakiilada Beesha Caalamka. Kulanka oo ka dhacay hotel ku yaala Xerada Xalane ee xeyndaabka garoonka Aadan Cadde, ayaa looga hadlay khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka iyo sidii xal loogaga gaari lahaa. Beesha Caalamka, ayaa hoggaamiyaasha Soomaalidda ugu baaqday in ay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho, madaxda maamul-gobolleedyadana ay qaataan doorkooda ku aadan doorashada. Ilo wareedyo ku dhow shirka ayaa caddeeyay in madaxda maamul-gobolleedyada ay muujiyee kalsooni ku aadan sii socoshada shirka guud ee dhammeystirka heshiiskii doorashada ee…
Kulanka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo la baajiyay kaddib markii muuq uu hareeyay kulankii ka horreeyay
Guddoonka Baarlamaanka ayaa maanta baajiyay fadhigii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo loo ballansanaa in looga hadlo arrimaha xanuunka COVID-19 Fariinta loo kala diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay kulankaasi illaa maalinta arbacada ee 31ka bishan. “Mudane Xildhibaan shirkii beri oo Isniin ah ee loo balansanaa waxaa uu dib loo dhigey maalinta Arbacada ee tariikhdu ku beegan tahay 31 March”. ayaa lagu yiri fariinta loo kala diray xildhabaanada Baarlamaanka. Fadhigii loo ballansanaa sabtidii ayaa u baaqday kooram la’aan iyo buuq hareeyay ajandaha shirka.
Akhriso: Ra’iisul Wasaare Rooble oo maanta la kulmi doono madaxda maamul Goboleedyada
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta magaalada Muqdishu kula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada, si ay uga wadda-hadlaan arrimaha doorashooyinka iyo sida uu u dhici lahaa kulanka guud ee loogaga hadlayo arrimaha doorshooyinka. Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu furmo berri oo Talaado ah iyadoo looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka soo socda. Halkan kala soco kulanka maanta….
Xildhibaan Cilmi Maxamed “Anniga ma joogin kulanka balse waxaa la igu daray liiska 15-ka xildhibaan ee la mamnuucay”
Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka mid ah xildhibaannada 15-ka ah uu guddoonka baarlamaanka sheegay in laga mamnuucay shanta fadhi ee soo socota ee baarlamaanka, ayaa sheegay in uusan joogin kulanka balse lagu soo daray liiska xildhibaannada laga mamnuucay kulanka. “Waxaan ku baraarugay uun in baaralamaankii lasoo xiray, bannaanka baan joogay…warqadda soo baxday waxay sheegeysay dadkii is hortaagay ee kulanku uu ka socon waayay laakiin anigu kama mid aheyn” Mudanayaasha laga mumnuucay kulama ayaa lagu eedeeyay inay hor istaageen fadhigii shalay, balse waxaa ay gaashaanka u daruureen go’aanka guddoonka baarlamaanka.…